बार्षिक राशिफल - Yearly Horoscope (2075 सालको राशिफल)
2075 सालको वार्षिक राशिफल
वि.सं. २०७५ साल । इश्वी सन् 2018/2019
यो वर्ष संघर्षमय पूर्वार्धको संक्रमण पार गर्दै उत्तरार्धमा विशेष उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भइनेछ। बर्षको सुरुवातमा व्यवसायमा उतारचढाव देखिनेछ । जेठ ६ देखि मंसिर १ गतेसम्म कष्टभावमा शनिदेवको उपस्थितिले काममा बाधा, मानसिक तनाव, चोटपटक र स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता एवं अत्यधिक खर्चको बनाउने योग परेको देखिन्छ।
साउन २१ गतेदेखि सुखभावमा जाने राहुले समस्या वृद्धि गर्नुका साथै घरमा अशान्ति र आफन्तबीच असमझदारी निम्त्याउन सक्छ । प्रारम्भमा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपरे पनि भदौ २१ मा बृहस्पतिको अनुकूल राशिस्थानान्तरणले स्थितिमा सुधार ल्याउनुका साथै विभिन्न अवसर र प्रतिष्ठा दिलाउनेछ । गुरुको अनुकूलताले अध्ययनमा राम्रो नतिजा हासिल गर्न सकिनेछ।
दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ भने नोकरीमा प्रवेश वा पदोन्नतिको योग छ । देशविदेशको यात्रा गर्ने अवसर जुट्न सक्छ । भाग्यले प्रेमपात्र जुराउनेछ भने प्रेमसम्बन्धले वैवाहिक मार्ग अवलम्बन गर्नेछ। राजनीतिक पहुँच बढ्नुका साथै जीवनशैलीमा उल्लेख्य सुधार आउनेछ । मंसिर १ देखि फागुन २६ सम्ममा लक्ष्यनजिक पुग्न सफल भइनेछ । फागुन २७ देखि कष्टभावमा प्रवेश गर्ने बृहस्पतिले शुभकार्यमा बाधा र स्वास्थ्यमा समस्या आउने सम्भावना छ ।
प्रतिकूल समयमा सम्बद्ध ग्रहको दोषशान्ति गर्नुपर्ला । शनिका लागि काली र हनुमानको आराधनाका साथै शनिबार पीपलमा जल चढाउनाले, राहुका लागि वटुकभैरव र छिन्नमस्ताको पूजा गर्नाले र बृहस्पतिका लागि बगलामुखी र शिवजीको पूजा गर्नाले फाइदा हुनेछ। आफ्ना इष्टदेवको आराधना गर्दा पनि प्रतिकूल दोष शान्त हुनेछ । वैशाख, साउन, मंसिर र चैत महिना स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल रहनेछन् भने असार, असोज, माघ र फागुन महिनामा विशेष अर्थलाभ हुनेछ ।
यो वर्ष आसलाग्दो प्रारम्भिक परिवेशबाट संघर्षमय मध्यकाल पार गर्दै अन्त्यमा विशेष उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भइनेछ। वर्षभरि विभिन्न उतारचढाव आउनेछन्। वर्षको पूर्वार्ध र अन्त्य समयमा बृहस्पतिको अनुकूलताले विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन्। केही परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपरे पनि यस बीचको मिहिनेतले दिगो फाइदा दिलाउनेछ।
अध्ययनमा राम्रो नतिजा हासिल हुनेछ। नोकरीमा प्रवेश, पदोन्नति वा अनुकूल स्थानान्तरण हुने सम्भावना छ। लगनशीलताले विदेश जाने अवसरसमेत दिलाउन सक्छ। घरमा मंगलमय कार्य सम्पादन हुनेछ। प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक बन्धनतर्फ अघि बढ्नेछ। साउन २१ गतेसम्म सुखभावमा राहुको उपस्थितिले पारिवारिक माहोल अशान्त रहनेछ। जेठ ६ देखि मंसिर १ गतेसम्म शनिदेव कष्टभावबाट बाहिरिनाले रोकिएका काम बन्नुका साथै अप्ठ्यारा परिस्थितिबाट मुक्ति मिल्नेछ।
तर, भदौ २१ देखि फागुन २७ सम्म बृहस्पति शत्रुभावमा जाने हुँदा प्रतिकूल प्रभाव बढ्नुका साथै आफन्तसँग वैरभाव, स्वास्थ्यमा समस्या र व्यवसायमा शत्रुबाधा देखापर्न सक्छ। वैशाख र मंसिरपछिका महिनामा कष्टभावमा रहने शनिको अढैया दशाले काममा बाधा, असफलता, मानसिक तनाव, चोटपटक, स्वास्थ्यबाधा, अत्यधिक खर्चजस्ता समस्या निम्त्याउने देखिन्छ। अप्ठ्यारो समयमा प्रतिकूल ग्रहको शान्तिकर्म गर्दा फाइदा हुनेछ।
बगलामुखी र शिवजीको पूजाले बृहस्पतिजन्य दोष निवारण हुन्छ भने शनिबार पीपलमा जल चढाउँदा, कालीको पूजा गर्दा शनिजन्य दोष र वटुकभैरव तथा छिन्नमस्ताको पूजा गर्दा राहुजन्य दोष निवारण हुनेछ। यसबाहेक आफ्ना इष्टदेवको पूजा गरी रोकिएका काममा पुन: प्रयास गर्दा पनि लाभ हुनेछ। साउन, कार्तिक, फागुन र चैत महिनामा विशेष फाइदा हुनेछ भने वैशाख, जेठ, भदौ र मंसिर महिना स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल रहनेछन्।
यो वर्षको गोचरले सामान्य असमझदारीको प्रारम्भिक परिवेशबाट साझेदारी तथा संयुक्त आधारशीला विखण्डन गर्दै एकल अवधारणामा अवतरित गराउन सक्छ। तापनि, समग्रमा वर्ष उन्नतिप्रदायक रहनेछ। अर्थ उपार्जनका विभिन्न स्रोत जुट्नेछन् भने आवास, भूमि तथा सवारीसुख प्राप्त हुने समय छ।
मिहिनेत गर्दा नोकरीमा प्रवेश वा पदोन्नति हुने सम्भावना छ। भाग्यले प्रेमपात्र जुराउनेछ भने एक्लो जीवनले वैवाहिक मार्ग अवलम्बन गर्नुका साथै सन्तानसुख समेत प्राप्त गर्ने योग रहेको छ। भदौ २१ गतेसम्म गृहभावमा बृहस्पति रहनाले घरेलु समस्यासँग संघर्ष गर्नुपर्ला। सगोलको सम्पत्तिमा भागबन्डा लाग्न सक्छ।
आफन्तजन टाढिने सम्भावना रहेकाले संयमतापूर्वक व्यवहार गर्नुहोला। वैशाख र मंसिरपछिका महिनामा दाम्पत्यभावमा शनिदेवको उपस्थितिले जीवनसाथीका लागि चिन्तित रहनुपर्ला। साउन २१ देखि धनभावमा प्रवेश गर्ने राहुले धनको विषयमा चर्को विवाद निम्त्याउन सक्छ। बाँडफाँडको विवादले साझेदारीमा समस्या निम्त्याउने देखिन्छ। सामाजिक मर्यादा तथा नीतिनियमको बन्धनले पनि केही समस्या उब्जाउन सक्छ। भदौ २१ गतेदेखि विद्याभावमा बृहस्पतिको स्थानान्तरणले बौद्धिक क्षमता बढ्नुका साथै अध्ययनमा राम्रो सफलता प्राप्त हुनेछ।
पहिलेका समस्या सुल्झनेछन् भने आर्थिक स्थितिमा सुधार आउनेछ। क्षमता प्रदर्शन गरेरै स्वरोजगार बन्न सफल भइनेछ। रोजगार वा अध्ययनको सिलसिलामा विदेश जाने अवसर प्राप्त हुनेछ। अड्किएका काम पुन: प्रारम्भ हुनेछन्। प्रतिकूल समयमा पनि अनिष्ट ग्रहको शान्ति र आफ्ना इष्टदेवताको पूजा–आराधना गर्दा फाइदा भइरहनेछ। तुलनात्मक रूपमा जेठ, असार, असोज र माघ महिना अलि कष्टदायक रहनेछन् भने वैशाख, भदौ, मंसिर र चैत महिनामा बढी फाइदा हुनेछ।
यो वर्ष आसलाग्दो मध्यम परिवेशबाट केही संघर्ष र उतारचढाव पार गर्दै अन्त्यमा विशेष उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भइनेछ। प्रारम्भिक ग्रहस्थिति मध्यमफलदायी देखिए पनि प्रयत्न गर्दा आम्दानीका विभिन्न माध्यम फेला पर्नेछन्। मिहिनेतले नोकरीमा प्रवेश गराउन सक्छ। राजनीतिमा लाग्नेहरूलाई विशेष पद प्राप्त हुने सम्भावना छ।
भाग्यले घरजग्गालगायत स्थायी सम्पत्ति दिलाउन सक्छ। उद्योगधन्दा र व्यवसायमा विशेष फाइदा हुनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै सुमधुर दाम्पत्य एवं सन्तान सुख प्राप्त हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि वर्षको प्रारम्भ र अन्त्य बढी उपलब्धिमूलक रहनेछ। जन्मकुण्डलीमा प्रतिकूल शनि हुनेहरूलाई जेठदेखि कार्तिकसम्म अध्ययनमा बाधा र सन्तानको चिन्ताले सताउन सक्छ।
मंसिरदेखि शनिदेव शत्रुभावमा जानाले स्थिति अनुकूल बन्नुका साथै शत्रु र प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सफल भइनेछ। भौतिक साधन जुट्नुका साथै कृषिकर्म र चौपायाबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ। धनभावका राहुले साउन २१ गतेसम्म फजुल खर्च एवं वादविवाद निम्त्याउने र उप्रान्त शीर्षभावमा प्रवेश गरी गलत बाटोतर्फ अग्रसर गराउने सम्भावना छ। भदौ २१ गते गृहसुखभावमा बृहस्पतिको स्थानान्तरणले कामको दायित्व बढाउनेछ।
तर, उच्च महत्वाकांक्षाले प्रश्रय पाउने हुँदा बुद्धि–विवेकले काम लिन नसकिएला। शुभचिन्तकहरूले पनि साथ दिन छोड्नेछन्। साझेदारीमा विवाद र पारिवारिक मतभेद देखापर्ने हुँदा संयमतापूर्वक काम लिनुपर्नेछ। आफ्ना इष्टदेवका साथै शिवजी, वगलामुखी भगवती र वटुकभैरवको पूजा–आराधना गर्नाले प्रतिकूल समयमा पनि फाइदा हुनेछ। वैशाख, जेठ, असोज र पुस महिना बढी लाभदायक रहनेछन् भने असार, साउन, कार्तिक र फागुन महिना अलि कष्टदायी रहनेछन्।
यो वर्ष उत्साहजनक परिवेशबाट शक्तिक्षयपछिका उतारचढाव पार गर्दै संघर्षद्वारा उपलब्धि पुन:स्थापित गर्न सफल भइनेछ। वाणीभावका बृहस्पतिको प्रभावले वर्षारम्भ उत्साहजनक रहनेछ। विद्यार्थीहरूको लेखन तथा अभिव्यक्ति कलामा निखारता आउनेछ भने तारिफयोग्य काम सम्पादन हुनाले मानसम्मानसमेत प्राप्त हुनेछ।
इच्छाशक्ति एवं लगनशीलताले व्यावसायिक मार्ग अवलम्बन गर्नुका साथै धनआर्जनका विभिन्न स्रोतहरू प्राप्त हुनेछन्। भाग्यले प्रेमपात्रका रूपमा जीवनसाथी जुराउनुका साथै गृहस्थीको सुखसागरमा रमाउने अवसर दिलाउन सक्छ। तर, साउन २१ सम्म मस्तिष्क राहुग्रस्त हुने हुँदा आफ्नै असंयम व्यवहारले समस्या निम्त्याउनेछ भने निकटजनहरूसँग बिनाकारण टाढिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।
त्यसउप्रान्त खर्चभावमा जाने राहुले आकस्मिक खर्च बढाउने हुँदा आर्थिक संकट उपस्थित हुन सक्छ। यात्रामा व्यवधान आउनेछ भने वैदेशिक रोजगारीमा पनि समस्या उपस्थित हुनेछ। जेठदेखि कार्तिकसम्म शनिको अढैयाले परिस्थिति थप कमजोर बन्नेछ। विश्वास जितेर ठग्नेहरूले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउनेछन् भने पारिवारिक विवादले चर्को रूप लिने हुँदा तीव्र आलोचना सहनुपर्ने हुनसक्छ। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सुनिश्चित कामसमेत अवरुद्ध बन्नेछन् भने आफ्नो सम्पत्तिमाथि अरूले अधिकार जमाउन सक्छन्।
अनीति र अन्यायको सिकार हुँदासमेत आफन्तजन तथा शुभचिन्तकहरू मौन रहने हुँदा बुद्धिविवेकले काम लिनुपर्नेछ। मंसिरदेखि स्थितिमा सुधार आउनुका साथै आफन्तहरूको सहयोग प्राप्त हुनेछ। जन्मकुण्डलीमा शनि र राहु कमजोर हुनेहरूले काली र वटुकभैरवको पूजा गरी विधिपूर्वक शान्ति गर्नुपर्ला। यो वर्ष जेठ, असार, कार्तिक र माघ महिना लाभदायक रहनेछन् भने साउन, भदौ, मंसिर र चैत अलि प्रतिकूल रहनेछन्।
यो वर्षको प्रारम्भमा विभिन्न चुनौतीहरूसँग संघर्ष गर्दै मध्यतिरको संक्रमणपश्चात् विशेष उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भइनेछ। सुरुमा ग्रहहरू अनुकूल नहुनाले पारिवारिक असमझदारी बढ्नुका साथै घरायसी समस्या देखापर्नेछन्। प्रेममा विश्वासको दूरी बढ्न सक्छ। नियमित काममा बाधा हुनेछ भने आम्दानीका स्रोत कमजोर बन्नेछन्।
वैशाख र मंसिरदेखि चैतसम्म सुखस्थानमा शनिको अढैयाजन्य प्रभावले अशान्ति, स्वास्थ्यबाधा, धनहानि, लाञ्छनाजस्ता समस्याले मन विचलित बन्नेछ। साउन २१ देखि राहुको अनुकूल स्थानान्तरणले प्रतिकूल स्थितिमा सुधार आउनेछ भने आम्दानीका स्रोतसमेत प्राप्त हुनेछन्। भदौ २१ देखि धनभावमा जाने बृहस्पतिको प्रभावले परिस्थिति अनुकूल बन्नुका साथै भाग्यले साथ दिनेछ। टाढिएका आफन्त नजिकिनेछन्।
प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसिनेछ। शैक्षिक उपलब्धिले मानसम्मान दिलाउनेछ। नोकरीमा अनुकूल दायित्व र स्थानप्राप्ति हुन सक्छ। कृषि तथा व्यापारमा आम्दानी बढ्नुका साथै मनग्गे धन सञ्चय गर्न सकिनेछ। मंसिर १ गते पुन: सुरु हुने शनिअढैयाले पहिलेका समस्या दोहोर्याउन सक्छ। परिवारभित्र कलह, काममा विलम्ब, आर्थिक संकट, झुटा आरोप, आफन्तमा वैरभावजस्ता झमेला निम्त्याउने हुँदा जन्मकुण्डलीमा शनि कमजोर हुनेहरूले विधिपूर्वक शनिदेवको शान्ति गर्नुपर्दछ।
शनिबार पीपलमा जल चढाउनुका साथै काली भगवतीको पूजा–आराधना गर्नाले पनि फाइदा हुन्छ। यस्तै, राहुको प्रतिकूल समयमा वटुकभैरव र छिन्नमस्ता भगवतीको पूजा गर्नाले फाइदा हुन्छ। आफ्ना इष्टदेवको नियमित उपासनाले पनि कमजोर समयमा फाइदा भइरहनेछ। विशेष काम असोज, कार्तिक महिनामा बन्न सक्छन्। असार, साउन, मंसिर, फागुन महिनामा पनि फाइदा हुनेछ। वैशाख, भदौ र पुस महिना अलि प्रतिकूल रहनेछन्।
यो वर्ष प्रारम्भिक मध्यम परिवेशबाट संघर्षमय मध्यकाल पार गर्दै अन्त्यमा विशेष उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भइनेछ। प्रारम्भमा खर्चभावका बृहस्पतिको प्रभावले यात्रा, धर्मकर्म तथा मंगलकार्यका लागि धन खर्च गरिनेछ। मनग्गे आम्दानी भए पनि प्रतिकूल स्थानान्तरणले रोजगारीमा चुनौती देखापर्नेछ।
अध्ययनमा समय दिन नसकिने र व्यवसायमा अवरोध आउने देखिन्छ। भदौ २१ देखि जन्मराशिमा बृहस्पतिको आगमनले नोकरी तथा स्थापित व्यवसायमा फाइदा हुनेछ। परिवारजनमा भने विश्वासको संकट देखापर्न सक्छ। जेठदेखि कार्तिकसम्म धनभावमा रहने शनिदेवको अन्त्य साढेसाती चल्ने हुँदा आर्थिक क्रियाकलापमा मन्दी आउनेछ। यसबीचमा कम आम्दानी, अत्यधिक खर्च, काममा विलम्ब, अवरोध, तीव्र आलोचना, अस्वस्थता जस्ता समस्या आउन सक्छन्।
कर्मक्षेत्रमा वादविवाद आउनाले आत्मसम्मानमा बाधा पुग्न सक्छ। प्रतिस्पर्धीहरूले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन्। प्रेमसम्बन्धमा खटपटी र दाम्पत्यमा मतभेद देखापर्न सक्छ। दीर्घकालीन योजना नहुँदा उपलब्धिबिनै समय व्यतीत हुनेछ। मंसिरदेखि शनिको अनुकूल स्थानान्तरणले स्थितिमा सुधार आउनेछ भने शत्रु परास्त हुनुका साथै गुमेको अवसर पुन: प्राप्त हुनेछ।
कृषि तथा पशुपालनमा फाइदा हुनेछ। नोकरीमा प्रवेश तथा पदोन्नति हुने बलियो सम्भावना छ। वर्षान्ततिर अध्ययनले गति लिनेछ भने विदेशयात्राको अवसर समेत प्राप्त हुने देखिन्छ। यो वर्ष प्रतिकूल समयमा शनिदेवको शान्ति गर्नुहोला। पीपलमा शनिबार जल चढाउनाले, काली भगवतीको पूजा–आराधना गर्नाले पनि साढेसातीको दोष कम हुनेछ। चिताएका काममा साउन, भदौ, पुस र चैत महिनामा सफलता मिल्नेछ। जेठ, असोज, कार्तिक र माघ महिना स्वास्थ्यका लागि अशुभ रहनेछन्।
यो वर्षमा उत्साहजनक प्रारम्भिक परिवेशबाट संघर्षमय मध्यकाल पार गरी अन्त्यमा अवरोधहरू चिर्न सफल भइनेछ। लक्ष्यअनुसारको काम पूर्णरूपले सम्पादन नभए पनि सुरुको मिहिनेतले वर्षभरि फाइदा दिनेछ। भदौ २१ सम्म आयभावका बृहस्पतिको अनुकूल प्रभावले मनग्गे अर्थ उपार्जन हुनेछ। अग्रजहरूको सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुनाले महत्वाकांक्षी काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ।
तारिफयोग्य काम सम्पादन गर्नाले थप अवसर प्राप्त हुनेछन्। प्रेमको गाँठो कसिनुका साथै वैवाहिक बन्धनमा बाँधिने साइत जुर्न सक्छ। समाजसेवा एवं परोपकारी काममा मन जानेछ। भदौपछि गुरु खर्चभावमा जाने र वर्षभरि शनिको मध्य र अन्त्य साढेसाती रहने हुँदा फजुल खर्च बढ्नुका साथै कर्मयोगमा अवरोध आउने देखिन्छ। ईर्ष्या गर्नेहरूले चर्को आलोचना गर्नेछन्।
चिताएको काममा अवरोध आउन सक्छ। ठूला अधिकारीसँगको विवादले नोकरीमा असहज अवस्था आउने सम्भावना छ। झुटा आरोप, काममा विलम्ब, आर्थिक कठिनाइ र मानहानिको योग भएकाले होसियार रहनुहोला। अत्यधिक खर्च लागे पनि प्रयत्न गर्दा देशविदेशको यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ। अध्ययनमा सुरुमा समय दिन नसकिए पनि वर्षान्तमा राम्रै प्रगति हुनेछ। परिस्थिति अनुकूल बन्नाले वर्षान्ततिर पहिले रोकिएका कामहरू पनि सम्पादन हुनेछन्।
वैशाख, भदौ, असोज र माघ महिनामा गरेका प्रयासहरू सकारात्मक रहनेछन् भने असार, कार्तिक, मंसिर र फागुन महिनामा अलि हानि हुन सक्छ। विधिपूर्वक शनिदेवको शान्ति गर्दा वर्षभरि देखापर्ने प्रतिकूलताबाट बच्न सकिनेछ। शनिबार पीपलमा जल चढाउनाले र काली भगवतीको पूजा–आराधना गर्नाले साढेसातीजन्य दोष शान्त भई लाभ मिल्नेछ। यसबाहेक आफ्ना इष्टदेव र बगलामुखी भगवतीको पूजा–आराधना गर्दा पनि फाइदा हुनेछ।
यो वर्ष अवसरले दिने उत्साहलाई विविध चुनौती र संघर्षमय संक्रमण पार गर्दै खुसीमा रूपान्तरण गर्न सफल भइनेछ। बृहस्पतिको अनुकूलताले विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन्। नोकरीमा प्रवेश वा पदोन्नति, व्यापारमा वृद्धि तथा राजनीतिमा आंशिक सफलता प्राप्त हुने योग छ। कृषिमा उत्पादन बढ्नेछ भने पशुपालनमा पनि फाइदा हुनेछ।
व्यवसायतर्फ उतारचढाव आए पनि दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। कीर्तिमानी काम गर्दै नाम, दाम र इनाम हातपार्ने समय छ। अध्ययनले नयाँ गति लिनेछ भने व्यावहारिक ज्ञानको उचाइमा वृद्धि हुनेछ। पढाइ तथा रोजगारीका सिलसिलामा देश–विदेश घुम्ने अवसर जुर्न सक्छ। भाग्यले मन मिल्ने प्रेमपात्र जुराउनुका साथै यो वर्ष लगनगाँठोसमेत कसिने बलियो सम्भावना देखिन्छ। गृहस्थी सुखद् र आनन्दमय रहनेछ।
धर्मकर्म, तीर्थाटन तथा परोपकारी काममा प्रवृत्त भइनेछ। वर्षको उत्तरार्धमा सन्तानसुखको योग रहेको छ। वर्षभरि शनिको आद्य र मध्य साढेसाती भएकाले घरायसी विवादले चर्को रूप लिन सक्छ। जन्मसमयमा प्रतिकूल शनि हुनेहरूलाई अस्वस्थता, झुटा आरोप, धनहानिजस्ता बाधा आउनुका साथै टाउको तथा नसा–जोर्नीमा समस्या देखापर्ने सम्भावना छ। साउन २१ देखि कष्टभावमा जाने राहुले पनि दुर्घटना, चोटपटक, रोग, विछोड आदि निम्याउने सम्भावना देखिन्छ। मनग्य आम्दानी भए पनि फजुल खर्च बढ्नेछ।
प्रतिकूल शनि हुनेहरूले काली भगवतीको आराधना गरी प्रत्येक शनिबार पीपलमा जल चढाउनाले फाइदा हुनेछ। कमजोर राहु शान्तिका लागि छिन्नमस्ता भगवती र वटुकभैरवको पूजा गर्नुहोला। यसबाहेक आफ्ना इष्टदेवको पूजा–आराधना गर्दा पनि फाइदा हुनेछ। यो वर्ष जेठ, असोज, कार्तिक र फागुन महिनामा विशेष फाइदा हुनेछ भने साउन, मंसिर, पुस र चैत महिना अलि प्रतिकूल रहनेछन्।
एकसाथ प्राप्त हुने अवसर र चुनौतीको संक्रमणबाट केही वस्तु गुमाउनुपरे पनि यो वर्ष विशेष उपलब्धि प्राप्त हुनाले जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सफल भइनेछ। वर्षारम्भमा केही खर्च र संघर्ष गर्नुपरे पनि कर्मयोग बलियो रहनेछ। बृहस्पतिको अनुकूलताले धर्मकर्म, तीर्थाटन तथा परोपकारी काममा प्रवृत्त भइनेछ। अध्ययनमा अभिरुचि बढ्नुका साथै उल्लेख्य प्रगति हातपार्न सफल भइनेछ। प्रतिभाको उच्च मूल्यांकन हुनेछ भने सामाजिक रूपमा ख्याति बढ्नेछ।
धेरैलाई फाइदा हुने काम सम्पादन गर्दै नाम, दाम र इनाम हातपार्ने समय छ। वर्षको मध्यतिर नोकरीमा प्रवेश, पदोन्नति वा अनुकूल स्थानान्तरण हुने बलियो सम्भावना छ। व्यापारमा मनग्गे लाभ हुनाले आर्थिक स्थितिमा सुधार आउनेछ। सवारी तथा चल–अचल सम्पत्ति जोड्ने प्रबल ग्रहयोग देखिन्छ। उच्चशिक्षा तथा रोजगारीका लागि देश–विदेशको यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। भाग्यले असल जीवनसाथी जुराउन सक्छ।
शनि र राहुको प्रतिकूल प्रभावले खुसीको उज्यालो दिनमा समस्याका बादल समेत देखापर्नेछन्। कष्टभावमा राहुको उपस्थितिले चोटपटक, अस्वस्थता, काममा बाधा जस्ता समस्या आउनेछन् भने साउन २१ देखि दाम्पत्यमा मतभेद र प्रेमसम्बन्धमा खटपटीसमेत निम्त्याउन सक्छ। वैशाख र मंसिरदेखि चैतसम्म शनिको आद्य साढेसातीजन्य प्रभावले पनि अर्थ अभाव, व्यवधान, आरोप, शरीरमा कष्ट जस्ता समस्या निम्त्याउने देखिन्छ।
मातापिताको स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। जन्मलग्नमा राहु प्रतिकूल हुनेहरूले वटुकभैरव र छिन्नमस्ताको उपासना गर्नुहोला। काली भगवती र हनुमानको पूजा–आराधनाका साथै शनिबार पीपलमा जल चढाउनाले शनिदोषमा कमी आउनेछ। यो वर्ष असार, कार्तिक, मंसिर र चैत अनुकूल छन् भने वैशाख, भदौ र पुस महिना प्रतिकूल रहनेछन्।
संघर्षमय प्रारम्भिक परिवेशबाट समस्याहरू चिर्दै यो वर्षको मध्यदेखि जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन सफल भइनेछ। सुरुका पाँच महिनामा अत्यधिक खर्च हुनाले आर्थिक अवस्था कमजोर बन्न सक्छ। प्रतिकूल स्वास्थ्यका बाबजुद कामको बोझ बढ्नेछ। स्थायी सम्पत्तिमा विवाद आउनुका साथै परिवारजनबाट टाढिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।
व्यावहारिक समस्या आउनेछन् भने ऋणको बोझ उठाउनुपर्ने हुन सक्छ। प्रतिस्पर्धीहरूले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउने हुँदा सजग रहनुपर्नेछ। साउन २१ देखि राहुको राशिपरिवर्तनले प्रतिकूल स्थिति हट्नेछ भने भदौ २१ मा भाग्यभावमा बृहस्पतिको स्थानान्तरण हुनाले भाग्योदयका साथ जीवनशैलीमा उज्यालो आउनेछ। समाजमा गुमेको स्थान प्राप्त हुनुका साथै आफ्नो वर्चस्व बढ्नेछ। रोकिएका धेरै काम सम्पादन हुनेछन् भने धर्मकर्म तथा परोपकारी काममा प्रवृत्त भइनेछ।
अध्ययनले नयाँ गति लिनेछ। पढाइ तथा रोजगारीका सन्दर्भमा देश–विदेशको भ्रमण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। मिहिनेतले दाम, इनाम र प्रतिष्ठा दिलाउनेछ। दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुन सक्छ मिहिनेत गर्दा यो वर्ष नोकरीमा प्रवेश पाउने बलियो सम्भावना छ। भाग्यले प्रेमपात्र जुटाउनुका साथै वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने साइत जुर्न सक्छ। वर्षभरि शनि अनुकूल हुनाले भौतिक सुख–सुविधा बढ्नेछ। व्यापार, नोकरी तथा ठेक्कापट्टाबाट पनि फाइदा हुनेछ।
बहुमूल्य धातु, यन्त्र र सवारीसाधन प्राप्त हुने सम्भावना छ। यो वर्षको प्रतिकूल समयमा शिवजी, वटुकभैरव, बगलामुखी र छिन्नमस्ताको पूजा–आराधना गर्दा फाइदा हुनेछ। आफ्ना इष्टदेवको पूजा गर्नाले पनि अप्ठ्यारो समयमा लाभ मिल्नेछ। तुलनात्मक रूपमा वैशाख, साउन, मंसिर र पुस महिनामा विशेष फाइदा हुनेछ भने जेठ, असोज र माघ महिना अलि प्रतिकूल रहनेछन्।
यो वर्षमा उत्साहजनक प्रारम्भिक परिवेशबाट संघर्षमय मध्यकाल पार गर्दै अन्त्यमा विशेष उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भइनेछ। वर्षारम्भमा विभिन्न अवसर प्राप्त हुनुका साथै दैनिकीले उचाइको बाटो समाउनेछ। व्यवसायमा उल्लेख्य प्रगति हुनेछ भने आयआर्जनका स्रोत प्रशस्तै भेटिनेछन्। भाग्यले जीवनसाथी जुराउनेछ भने गृहस्थी सुखसागरमा रमाउनेछ।
पहिलेको मिहिनेतले उत्तम रोजगारी दिलाउन सक्छ। नोकरीमा पदोन्नति वा अनुकूल स्थानान्तरण हुने बलियो सम्भावना छ। विद्यार्थीहरूमा तर्कशक्ति बढ्नेछ। अध्ययन तथा रोजगारीका लागि विदेशयात्राको अवसर प्राप्त हुने समय छ। साउन २१ देखि विद्याभावमा जाने राहुको प्रभावले गुरुजनसँग असमझदारी बढ्नेछ भने अध्ययनमा बाधा हुनेछ। सन्तानबारे चिन्ता बढ्नेछ। पेटको समस्याले सताउन सक्छ।
भदौ २१ देखि फागुन २७ गतेसम्म बृहस्पति कष्टभावमा जानाले काम रोकिनुका साथै लक्ष्य प्राप्त गर्न समस्या पर्नेछ। आफन्त तथा शुभचिन्तकहरू समेत टाढिन सक्छन्। अत्यधिक खर्च बढ्नाले व्यवहार चलाउन कर्जा लिनुपर्ने हुन सक्छ। शरीरमा चोटपटक, साझेदारीमा झमेला, व्यापारमा हानि तथा नोकरीमा दुर्गम स्थानान्तरण जस्ता समस्या आउन सक्छन्। वर्षको अन्त्यमा पुन: परिस्थिति अनुकूल बन्नाले पहिलेको उपलब्धि प्राप्त हुनेछ।
रोकिएका धेरै काम सम्पादन हुनेछन्। धर्मकर्म तथा परोपकारी काममा प्रवृत्त भइनेछ। अध्ययनले नयाँ गति लिनेछ। राजनीतिक पहुँच बढ्नेछ भने सुखद समाचारले आनन्द दिलाउनेछ। राहुको प्रतिकूल समयमा वटुकभैरव र छिन्नमस्ताको पूजा गर्नुहोला। शिवजी र बगलामुखीको आराधनाले बृहस्पतिजन्य समस्या हट्नेछन्। आर्थिक रूपमा जेठ, भदौ, पुस र माघ महिनामा बढी फाइदा हुनेछ भने असार, कार्तिक र फागुन महिना प्रतिकूल देखिएकाले संयमित भएर काम गर्नुहोला।
आजको राशिफल – TODAY’S HOROSCOPE ( २०७४ साल असार २७ गते)
जहिले पनि यी राशी हुनेसँग सम्बन्ध राख्नु होस्, चम्किनेछ तपाईको भाग्य !
यी ५ राशिका युवतीहरुको संगत गर्नुहोस कहिलै धोका खानुपर्दैन
पहिलो समाचारकाठमाडौँको बबरमहलमा मोटरसाइकल दुर्घटना,एकको मृत्यु अर्को समाचारसिन्डिकेट तोड्न सरकारले नै पठायो बनेपा-धुलिखेल रुटमा साझा र मेट्रो
4 thoughts on “बार्षिक राशिफल – Yearly Horoscope (2075 सालको राशिफल)”